ဂျူးလူမျိုးများနှင့်ပါတ်သက်၍ကြိုတင်ဟောကြားခြင်း | The Jews in Bible Prophecy | Real Conversion
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၁ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊
“အကြောင်းမူကား သင်တို့ကို အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့က ငါခေါ်ခဲ့၍စုဝေးပြီးလျှင်၊ သင်တို့နေရင်းပြည့်သို့ ငါပို့ဆောင်မည်” (ယေဇ၃၆း၂၄)။
ကျွန်ုပ်တို့၏ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဂျူးလူမျိုးများနှင့်ပါတ်သက်၍ အထပ်ထပ်အခါခါ၊ ဘုရားသခင်ကတိတော်ထားတော်မူခဲ့၏။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတော်မြတ်၌ အနည်းဆုံး၂၅ချက်၊ ဂျူးလူမျိုးတို့ အား၊ ဘုရားသခင်သည် ကတိတော်ပေးတော်မူခဲ့၏။ ထိုကတိတော်များအထဲက၊ ဘုရားသခင်သည် ဂျူးလူမျိုးတို့အား မိမိတို့နေရင်းပြည်သို့ ပို့ဆောင်တော်မူမည့် အကြောင်းကို၊ ဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျမ်းကိုးအပါအဝင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖေါ်ပြဂတိပြုခဲ့ပါသည်။
“အကြောင်းမူကား သင်တို့ကို အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့က ငါခေါ်ခဲ့၍ စုဝေးပြီးလျှင်၊ သင်တို့နေရင်းပြည်သို့ ငါပို့ဆောင်မည်” (ယေဇ၃၆း၂၄)။
ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် ဘုရားသခင်သည် သစ္စာရှင်ဖြစ်သည်ကို ထောက်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့တွင် ဗါဗုန်နီးယားလူ၊ ဟိတ္တိလူ၊ ဖိလိတ္တိလူသို့မဟုတ် အာမလက်လူ တို့ကို တွေ့ဖူးသောသူရှိပါသလား?တချိန်တခါတုန်းက သူတို့သည် လူမျိုးကြီးများဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယနေ့တွင် ထိုလူမျိုးတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့မတွေ့မမြင်ကြတော့ပေ။ သို့ပါသော်လည်း ယနေ့ခေတ်သစ်ထဲ ဂျူးလူမျိုးကိုမူကား ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နေရသည် အစ္စရေးနိူင်ငံသည် ယနေ့ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၂၀၀၀ခန့်က ဂျူးလူမျိုးတို့သည် ကြီးမားသော ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရကြပြီး၊ တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးသို့ ပြန်နှံ့ခဲ့ကြပါသည်။ အေဒီ၇၀တွင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတိတု ဦးဆောင်သော ရောမစစ်တပ်တို့သည် ယေရုဆလင်ကို သိမ်းယူခဲ့ကြပြီး ဂျူးလူမျိုးပေါင်း၁ç၃၀၀ç၀၀၀ ကျော်တို့ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြကာ၊ အချို့တို့ကိုကား ကျွန်ပြုစေခဲ့ကြသည်။ ယေရုရှလင်မြို့သည် ကွင်းပြင်ပမာ တိတ်ဆိတ်ခဲ့ရသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းကား၊ ဂျူးလူမျိုးတို့သည် တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးသို့ ပြန့်နှံHUထွက်ပြေးကြ၍ဖြစ်သည်။
ပထမရာစုနှစ်နှင့် ဒုတိယရာစုနှစ်အတွင်း ထောင်ပေါင်းရာနှင့်ချီသော ဂျူးလူအုပ်ကြီးသည် ဗါဗုလုန်နိုင်ငံသို့ ကျွန်ုပ်ပြုစေခဲ့ကြသည်။ အေဒီ၂၀၀ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ခန့်မှန်းချေအရ၊ ဂျူးလူမျိုး၂သန်း ခန့်၊ဗါဗုလုန်နိုင်ငံ၌ ရှိခဲ့သည်။
ရောမအင်ပါယာ၊ အင်ပါယာဧကရာဇ်မင်း၊ ကွန်စတင်တိုင်က၊ ဂျူးလူတို့အား တရားမဝင်အဖြစ် ကြေညာပြီး၊ ထိုသူတို့၏နားကို ဖြတ်ပစ်ခဲ့ကြသည်၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။ ရာစု၅နှင့် ၆ခုကြားတွင်၊ ဂျူးလူမျိုးတို့အပေါ် တင်းကြပ်သော ဥပဒေကိုချမှတ်ခဲ့ကြသည်။ ပြည်တွင်းအစိုးရဋ္ဌာန၌ တရားဝင် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန် တားမြတ်ပိတ်ပင်ခြင်းခံခဲ့ရကြသည်။ မြောက်များစွာသော ဂျူးလူတို့သည် နှိပ်စက်ခြင်း အမျိုးမျိုးကို ခံခဲ့ရကြသည်၊ အချို့တို့ကိုကား သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
၆ရာစုနှစ်တွင်၊ ၆၀၀၀၀မကသော ဂျူးလူတို့သည် အသေသတ်ခြင်းခံခဲ့ရကြ၏။ ထောင်ပေါင်းများ စွာသော ကျန်ဂျူးလူတို့ကိုမူကား ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပါသည်။ ၈ရာစုနှစ်ရောက်သောအခါ၊ ဂျူးလူ များစွာတို့သည် စပိန်နိုင်ငံတွင် မတရားစွပ်စွဲခြင်းခံရကြပြီး၊ ပြင်းထန်သော ညှင်းပန်းနှိပ်စပ်ခြင်းကို ခံခဲ့ကြသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌လည်း မြောက်များစွာ ဂျူးလူတို့သည် မီးအရှို့ခံခဲ့ကြရသည်။
သက္ကရာဇ်၆၂၂တွင်၊ မိုဟာမက်သည် အစ္စလမ်ဘာသာကို ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။ အသစ်အဆန်းဖြစ် နေသောဘာသာတရား သစ်ထဲ၊ ဂျူးလူတို့က အသင်းမဝင်လိုသောကြောင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၌ရှိ ဂျူးတို့သည် အသတ်ခံခဲ့ရကြပါသည်။ အစ္စလမ်ဘာသာသည် မြောက်အာဖရိကတိုက်မှ အနောက် ဥရောပတိုင်အောင် စပိန်နိုင်ငံမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အေဒီ၇၃၂တွင် ချားလ်မာတယ်လ်နှင့် အပေါင်းအပါ စစ်တပ်တို့အားဖြင့် တားဆီးနိုင်ခဲ့ကြ၏။ အကယ်၍ နောက်ပြန်မလှည့်ခဲ့သော်၊ ဥရောပတစ်ခွင်လုံး မွတ်ဆလင်တို့က လွှမ်းမိုးတော့မည်ဖြစ်သည်။
၈ရာစုနှစ်တုန်းက၊ မူစလင်ခေါင်းဆောင် အယ်လ်ဟာကင်က ဂျူးလူမျိုးတို့အား အသံပေးခေါင်း လောင်းများကို ဝတ်ဆင်စေပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
အလယ်ခေတ်ရောက်သောအခါတွင်၊ ဂျာမန်ပြည်က ဂျူးတို့ကို ကျွန်ခံစေ၍ မတရားအခွန်ခံစေပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ခံခဲ့ကြရပါသည်။ ဥရောပနိုင်ငံများက ဂျူးတို့အား နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ခြင်းကို တားမြတ်သည့်အပြင် နိုင်ငံအတွင်း ပညာသင်ကြားခွင့်ကိုလည်း ဂျူးလူမျိုးတို့မရရှိခဲ့ကြတော့ပေ။ ၁၀၂၀အေဒီ ရောက်သောအခါ၊ ကာသိုလ်လစ်၊ ကလေးသူငယ်များစစ်ပွဲ၊ ဃမကျadနျ အတွင်း၊ ကာသိုလ် လစ်ဘာသာဝင်တို့က ပြောကြားသည်မှာ “ဂျူးလူတို့ကို သတ်ဖြတ်ပါ၊ သို့ပြုလျှင် သင့်ဝိညာဉ်ကယ်တင် ခြင်းခံရမည်”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
၁၂၉၈ခုနှစ်တွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဂျူးလူတို့သည်၊ ဥရောပတိုက်တွင် အသေသတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရကြပါသည်။ ထို့နောက် ၁၃၅၀ခုနှစ်တွင်၊ ဥရောပတစ်ခွင်၌ ပလိပ်ရောဂါပျံနှံ့သဖြင့် လူဦးရေလေးပုံ တစ်ပုံခန့် သေကြေခဲ့ကြပါသည်။ ထိုရောဂါဖြစ်ပွါးရခြင်းသည် ဂျူးလူမျိုးများကြောင့်ဟု မတရားစွပ်စွဲကြ ပြီး ဂျူးလူမျိုးတစ်ဝက်ခန့် အသေသတ်ခြင်းခံခဲ့ကြပါသည်။
၁၃၅၃ခုနှစ်တွင် ဂျူးလူမျိုးတို့သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ပြည်နှင်ဒဏာ်ခံခဲ့ကြရသည်။ စပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီ နိုင်ငံတို့ကလည်း ဂျူးလူမျိုးတို့ လာရောက်နေထိုင်ခြင်းကို ခွင့်မပြုခဲ့ကြပေ။ ၁၅၆၀ခုနှစ်တွင်၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ပရိတ်မြို့မှ ဂျူးလူမျိုးအားလုံးကို နှင်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ၁၄၉၂ခုနှစ်တွင် စပိန်စစ်တပ်က ဂျူး၊၈၀၀ç၀၀၀ကို ပင်လယ်ထဲသို့ နှင်ချခဲ့သည်။ အများသောဂျူးလူတို့သည် ပင်လယ်ထဲ၌ ရေနစ်၍သေခဲ့ ရကြပါသည်။
၁၄၁၁ခုနှစ်တွင်၊ ရောမကာသိုလ်လစ် အသင်းတော်၌ ပြင်းထန်သော စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုရှိခဲ့ သည်။ ထိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးထဲ၌ ထောင်ဆယ်ချီသော ဂျူးလူမျိုးများ၊ အသေသတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထိုသူတို့က၊ လူသားဖြစ်ရသည်မှာ၊ ကြောက်လန့်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟု တွေ့မြင်လာခဲ့ကြရပါသည်။
ဇာဘုရင်လက်ထက်၌ ရုရှားနိုင်ငံတွင် ဂျူးလူမျိုးပေါင်း ငါးသန်းခန့်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၈၈၁ခုနှစ်တွင်၊ ရုရှားနိုင်ငံကို စွန့်ခွါရကြပါမည်။ ကျန်သုံးပုံတစ်ပုံသော ဂျူးတို့မူကား ရုရှားအသင်းတော်၌ ပါဝင်ကြ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်း များစွာသောဂျူးတို့သည် ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကို ခံစားခဲ့ကြရပါသည်။ ရုရှားတို့က၊ ဂျူးတို့အား ရာဇဝတ်သားပမာ၊ ဆိုင်ဘေးရီးယားသို့ စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဂျူးလူမျိုးတို့အား ပိုလန်၊ ရူမေးနီးယား၊ ဟန်ဂေရီနှင့် ယူကရိန်းနိုင်ငံတို့၌ နေရာပေးထားခြင်းကို ပေါက်ကရုန်ကဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ခဲ့ပါသည်။
အရှေ့ဥရောပ၌ နေထိုင်ကြသော ဂျူးလူမျိုးအများစုအား၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၌ ရုတ်တရက် ထိုးစစ် ဆင်နွဲခံကြပါသည်။ ၎င်းသည် ဟစ်တလာ၏ဂျူးလူမျိုးတို့အပေါ် အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ရန် ကြိုး စားခြင်း၏ ပန်းတိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ ရက်စက်စွာဖြင့် ဟစ်တလာ အုပ်စိုးချိန်တွင်၊ ဂျူးခြောက်သန်းခန့်ကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ထောင်ပေါင်းရာချီသော ဂျူးလူတို့အား အကျဉ်းစခန်း၌ ဂစ့်ဓါတ်ငွေ့ဖြင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ဟစ်တလာသည် ဥရောပ၌ရှိသော ဂျူးလူမျိုးဆယ်ယောက်လျှင်၊ ခြောက်ယောက်တို့အား သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆိုးဝါးသော ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ဂျူးတို့သည် နေရာအနှံ့၌ခံခဲ့ကြရသော်လည်း၊ ၁၉၄၈ခုနှစ် တွင် အစ္စာရေးနိုင်ငံတော်ကြီးကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်! ထိုနိုင်ငံကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သူဝန်ကြီးချုပ်၊ ဂေါလ်ဒါမိန်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင် ဂျူးလူမျိုးအသက်ပေါင်းများစွာ ပျက်စီးခဲ့ရသည်၊ အရှင်လက်လက်မြေမြှပ်ခံခဲ့ကြရသည်၊ မီးဖြင့်ရှို့သတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ကြရသည်”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ လူသားတို့၏ ဝိညာဉ်ကိုမူကား ဖျက်ဆီးပစ်ရန်မတတ်နိုင်ကြချေ။ ကျွန်ုပ်တို့က ဝိညာဉ်ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းအား ဆန့်ကျင်ပါသည်။ ခွန်အားတန်ခိုးကြီးမား၍၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆန့်ကျင်ရန်ပြု နိုင်သော်လည်း၊ ဝိညာဉ်ကိုမူကား မပြုပိုင်ပေ။”
ဂျေ၊ အေ၊ ကလစ်က “ကိုင်ရိုမြို့ရှိ ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်တွင် အနက်ရောင်လိပ်သည်းကျောက်ပေါ်၌ ရေးသားထားသော စာရှိသည်။ ၎င်းသည် ဒုတိယမြောက်ရစ်ဆစ်၏သား လက်တော်၁၄၀၀ဘီစီခေတ် တုန်းကဖြစ်ပါသည်။ ဖါရောဘုရင်မင်းကြီး၏ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ် သည်။” ထိုစာတွင် “ဂျူးလူမျိုးတို့သည် အပြီးသတ်မုန်းတီးသတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရကြသည်။” အစ္စရေးလူ မျိုးတို့၌ အနာဂတ် သားစဉ်မြေးဆက်များမရှိတော့ပါဟု အဆုံးသတ်ရေးသား ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ထိုသို့ ဖါရောမင်းဂုဏ်ယူဝါကြွားခြင်းကား၊ ဣသရေလလူတို့ကို သဲကန္တရ၌ ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသည့်အ တိုင်း၊ အတူတည်ရှိနေသည်ကို ထိုဘုရင်မသိ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဖါရောဘုရင်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဂျူးလူတို့သည် ယနေ့တိုင်အောင်ရှိနေကြသည်! (Sသကမခနါ် ဏကေူ Lနန Tညေယ Th.D.ယ Encyclopedia of 7,700 Illustrations, Assurance Publishers, 1979, pp. 635-637).
ဖရက်ဒရစ်ခ်(၂)သည် ၁၇၁၂မှ၁၇၈၆အထိ အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်။ ပရူရှာ၊ ဘုရင်ဖြစ်သဖြင့် ဖရက်ဒရစ်ခ်တာဂရိတ်ဟု ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုဘုရင်သည် သမ္မာကျမ်းစာတော်အခြေခံ ယူချက်ကို မယုံကြည်သသောခေတ်၌ အသက်ရှင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ တနေ့သော ညနေခင်းတွင်၊ ဘုရင်က “ဘုရားသခင်တည်ရှိကြောင်းကို ခိုင်လုံအောင်ဆွေးနွေးပေးမဲ့သူ သင်တို့၌ရှိသလား”?ဟု မေးမြန်းခဲ့ပါ သည်။ နန်းတော်၌ အမှုထမ်းတစ်ဦးက “ဂျူးလူများရှိတယ်၊ ဘုရင်မင်းမြတ်အသက်တာရှည်ပါစေ! ဟုလျှောက်ကြ၏။ ဂျူးလူတို့သည် ဘုရားသခင်အမှန်တည်ရှိသည်ကို လက်တွေ့သိသောသူများ ဖြစ်ကြသည်”ဟူ၍ ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ နန်းတော်အမှုထမ်းက၊ တိကျခိုင်မာသော၊ ဘုရားသခင် တည်ရှိခြင်းကို ထောက်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိလူဣသရေလတို့အား ပြုသည့်ကတိအတိုင်း စောင့်ထိန်းပါသည်။ ယနေ့အစ္စရေးနိုင်ငံကို ထူထောင်နိုင်ခြင်းသည်၊ ဘုရားသခင်က ထိုလူမျိုးတို့အား ထိန်းသိန်းကာကွယ်ခြင်း ဘုရားသခင် အမှန်တကယ်တည်ရှိခြင်းကို ထောက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထာ၀ရဘုရား မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့ကိုအတိုင်းတိုင်း၊ အပြည်ပြည်တို့က ငါခေါ်ခဲ့၍စုဝေးစေပြီးလျှင် သင်တို့နေရင်းပြည်သို့ ငါပို့ဆောင်မည်” (ယေဇ၃၆း၂၄)။
တဖန်ပြန်၍ မေးလိုပါသည်၊ ဗါဗုလုန်လူတဦး၊ ဟိတ္တိလူတဦးဦးသို့မဟုတ် ဖိလိတ္တိလူတဦးဦး သို့မဟုတ် အာမလက်လူတဦးဦးတို့ကို သင်တို့တွေ့ခဲ့ကြဘူးပါသလား? တချိန်တခါတုန်းက သူတို့သည် လူမျိုးကြီးများဖြစ်ကြပါသည်။ ယနေ့တွင် ၎င်းလူမျိုးတို့သည် ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရကြပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ဂျူးလူတို့သည် ယနေ့ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံလည်း ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်! အမှန်တကယ်တည် ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ ရောက်ခဲ့ဖူး၍ဖြစ်သည်!
ဟောရှဏ္ဏ ကောင်းကင်ဘုံရှင် ဟောရှဏ္ဏချီးမွမ်း!
(၁၈၄၈-၁၉၂၉ခုနှစ်၊ ဖရိဒရက်စ်.အီး၊ ဝေသာလီ၊ သီကုံးသော
ယေရုရှလင်၊ယေရုရှင်လင်၊ ညဉ့်ဟူ၍ မရှိပြီ!
ဒေါက်တာ.အမ်.အာရ်ဒီအန်း ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ဂျူးလူမျိုးတို့ မိမိတို့နေရင်းပြည်၌ ပြည်လည် စုရုံးလာခြင်းသည် ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတော့မည့် နမိတ်လက္ခဏာပင်ဖြစ်၏။ ဒေါက်တာဒီဟန်းပြော ကြားခဲ့သည်မှာ၊
-လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင့် ငါးရာက၊ ဂျူးလူမျိုးအများစုတို့နှင့် လွန်ခဲ့သောနှစ် ပေါင်းတစ်ထောင်ကိုးရာဝန်းကျင်က ဂျူးလူမျိုးတို့သည် ကမ္ဘာ့လေးမျက်နှာတွင် ပြန့်နှံ နေထိုင်လျှက်ရှိကြသည်။ ထိုဂျူးလူမျိုးတို့သည် တပါးသူတို့၏ မုန်းတီးခြင်း၊ ညှင်း ပန်းနှိပ်စပ်ခြင်းကို ခံခဲ့ကြသည်။ ခေတ်အဆက်ဆက်၌၊ ဂျူးလူမျိုးတို့အား အစုလိုက် အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားသောဟာမန်မှစ၍ ယနေ့မျက်မှောက်ကာလအထိပင် ဖြစ်သည်။ လူမျိုးတုံးအောင်သတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားကြသော်လည်း မတတ်နိုင်ကြချေ။ ထိုသူတို့သည် လူမျိုးနွယ်စုထဲက ပျောက်ကွယ်မသွားကြချေ။ ဘုရားသခင်ကတိထား တော်မူသည့်အတိုင်း မိမိတို့အမျိုးသီးသန့် ရပ်တည်လျှက်ရှိကြသည်။ ယ္ခုဆိုလျှင် (၁၉၄၈ကတည်းက)ဤလူမျိုးတို့သည် တပါးအမျိုးသားတို့ထဲ ပြန်နှံ့နေထိုင်ကြခဲ့ရာမှ ကတိတော်အတိုင်း မိမိတို့နေရင်းပြည်၌ စုရုံးကြပြီး လွပ်လပ်သောမိမိတို့နိုင်ငံကို ထူထောင်နိုင်ကြပေပြီဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကတည်းက လူအများတို့ပြော ကြားသည်မှာ၊ “ဘုရားသခင်က ဂျူးတို့ကိုစွန့်ပယ်ခဲ့ပြီ၊ ဂျူလူမျိုးတို့၊ ဘယ်တော့မှ ပါလတ်စတိုင်း၌ ခြေချနေထိုင်နိုင်မည်မဟုတ်တော့ပါ”ဟူ၍ ပြောဆိုကြပါသည်။ ထိုသို့ မှန်းခန်းပြောဆိုခြင်းသည် မှားယွင်းပါသည်။ အကြောင်းမှာ၊ ဘုရားသခင်သည် မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်သည်။ ရာစုနှစ်၊ ထောင်စုနှစ်ကတည်းက ဓမ္မဟောင်းခေတ် ပရောဖက်များဖြင့် မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ယနေ့တွင် အမှန်ပြည့် စုံနေပြီဖြစ်သည်။ (M.R. DeHaan, M.D., “The Sign of the Jew,” in Signs of the Times, Kregel Publications, 1996 edition, pages 25-26).
“အကြောင်းမူကား သင်တို့ကို အတိုင်းတိုင်း၊အပြည်ပြည်တို့က ငါခေါ်ခဲ့၍ စုဝေးစေပြီး လျှင်၊ သင်တို့နေရင်းပြည်သို့ ငါပို့ဆောင်မည်” (ယေဇ၃၆း၂၄)။
၁၈၆၄ခုနှစ်၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၁၅၀ခန့်က၊ ယေဇ၃၇း၁-၁၀ကို တရားဟောဆရာကြီး စပါဂျန်ဟော ကြားဝေငှါခဲ့သည်မှာ၊
ယခုတွင်၊ဣသရေလလူမျိုးတို့သည် ကမ္ဘာ့လူမျိုးစုမြေပုံထဲက ဖယ်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရ ကြပြီ၊ သူမ၏သားတို့သည် အဝေးသို့ပြန်နှံ့နေရကြပြီ၊ သူမ၏သားတို့သည် အဝေးသို့ပြန်နှံနေရကြပြီ၊ သူမ၏သမီးတို့သည်လည်း ကမ္ဘာကြီး၏မြစ်ငယ်နံဘေး ၌မျက်ရည်ကျလျက်၊ ငိုကြွေးခဲ့ကြရပြီ၊ သို့သော် အစ္စရေးသည် “သေနေသောအ ပြစ်မှ” ပြန်လည၍ စုစည်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ဣသရေလ၏ မျှော်လင့်ရာရှိသမျှတို့ သည် ပျက်သုန်းနေချိန်တွင်၊ ဘုရားသခင်သည် အစ္စရေးတို့ထဲသို့ ကြွလာမည်ဖြစ် သည်၊ ထိုအခါ ဣသရေလသည် ပြန်လည်၍ ဖွဲစည်းလာပြီး မိမိလူမျိုး၊ မိမိတို့အစိုး ရသစ်ပြန်လည် JYစည်းလာကြမည်ဖြစ်သည်။ “သင်တို့နေရင်းပြည်သို့၊ ငါပို့ဆောင်မည်”ဟူသော ကတိတော်အတိုင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ပို့ဆောင်မည်ဖြစ် ၍ ထိုသူတို့သည်ချမ်းသာကြွယ်၀ခြင်းနှင့် ပြည်စုံသောအတိုင်းနိုင်ငံကို ထူထောင်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ဣသရေလတို့သည် ကျော်ကြားလာမည်ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်နှင့်ပြည်စုံသော၊ နုတ်တော်ထွက်စကားသည် (ယေဇ၃၇)အတိုင်း ပြည်စုံမည်ဖြစ်သည်။ နုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ဝမ်းနည်းမျက် ရည်ကျရသည်ဟု ကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မကြုံခဲ့ရပါ။ နုတ်ကပတ်တော်၏ အမိန့်စကား သည်၊ ရိုးရှင်းပြီး အဓိပ္ပါယ်နှင့်ပြည်စုံ၏ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ တိကျသော ဆိုလိုရင်း သည်၊ ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက် ပြောလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဆယ်မျိုးနွယ်သောဣသရေ လလူတို့မိမိတို့နေရင်းပြည်၌ စုစည်းလာကြမည်ကို ဆိုလိုပါသည်။ အကယ်၍ ဝိညာဉ်ရေး အတွက်သာဆိုလျှင်၊ ယနေ့ဣသရေလ လူမျိုးတို့၌ကတိ တော်မပြည့်စုံသေးပေ။ (C.H. Spurgeon, “The Restoration and Conversion of the Jews,”The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1991 reprint, volume X. pp. 428-429).
စပါဂျန်က ဤဒေသနာကို ၁၈၆၄ခုနှစ်၊ ဂျူးလူမျိုးတို့ မိမိတို့နေရင်းပြည်သို့ မလာကြခင်၊ နှစ်ပေါင်း ရှစ်ဆယ့်လေးနှစ်ကတည်းက ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံကို ၁၉၄၈ခုနှစ်တွင်၊ လွတ်လပ် သောနိုင်ငံတခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာမည်ကို စပါဂျန် မည်ကဲ့သို့ တိကျစွာသိခဲ့ရသနည်း? အကြောင်းမှာ နုတ်ကပတ်တော်သည် မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ပြည့်စုံလာမည်ကို ယုံကြည်စိတ်ချ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
“အကြောင်းမူကား သင်တို့ကို အတိုင်းတိုင်း၊အပြည်ပြည်တို့က ငါခေါ်ခဲ့၍ စုဝေးစေပြီး လျှင်၊ သင်တို့နေရင်းပြည်သို့ ငါပို့ဆောင်မည်” (ယေဇကျေ ၃၆း၂၄)။
၁၉၁၇ခုနှစ်စပါဂျန်ကဲ့သို့ပင် စကော့ဖီးလ် အနက်ပြန်ကျမ်းစာသည်လည်း အလားတူအဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ဆောင်ပါသည်။ စကော့ဖီးလ်ကျမ်းက “ယ္ခုတွင် ဣသရေလလူတို့သည် ညှင်းဆဲခြင်းကို ခံရကြ၏ ထိုညှင်းဆဲခြင်းမှ ပြန်လည်၍ စုစည်းလာကြလိမ့်မည်”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ (The Scofield Study Bible, 1917, Oxford University Press; note on the Abrahamic Covenant in Genesis 15:18, p.25). နောင်သုံးဆယ့်တစ်နှစ်ပြည့်၍ ၁၉၄၈ခုနှစ်တွင်၊ သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ အစ္စရေးနိုင်ငံ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်!
အသက်၇၀ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းက၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုး၊ မြောက်ဘက်ရှိ၊ လောကီဆန်သော တောင်းပိုင်းနှစ်ခြင်း၊ ကျမ်းစာကျောင်း၏ စာကြည့်တိုက်၌ ကျွန်ုပ်စာဖတ်နေစဉ်၊ ပြန်လည်စုစည်းခြင်းနှင့် ပါတ်သက်သော ကတိတော်သည် အတိတ်နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ပါမောက္ခနှစ်ဦးက သွန်သင်ခဲ့ပါ သည်။ ဗါဗုလုန်နိုင်ငံ ကျွန်ပြုရာမှ ပြန်လည်စုစည်းခြင်းကိုသာ ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ လွပ်လပ်သောနိုင်ငံတော်အတွက်၊ ကြိုတင်ပြောကြားခြင်းမဟုတ်ဟု သွန်သင်ကြပါသည်။ ဤတွင် များစွာ အမှားကြီးမှားသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
၁။ ရိုလ်ဒင်းဂိတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ကျမ်းစာကျောင်းဓမ္မပညာရှင်များ မှားယွင်းနေသည် အကြောင်းမှာ ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ပြုချက်ထဲ၌ “ခေတ်ကာလ၏အဆုံး”တွင် ဟူသော စကားစုဖြင့် မကြာခဏ ဣသရေလလူမျိုးများ မိမိတို့နေရင်းပြည်စုံပြန်လည်စုစည်း လာမည်ကို ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဣသရေလ လူမျိုးများပြန် လည်စုစည်းလာမည်ကို ယေဇကျေလ၃၇၌ အထူးသဖြင့် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ အခန်း ကြီး၃၈၌ “ ကြာမြင့်စွာ ကာလလွန်ပြီးမှ”ဟူသော စကားစုကို တွေ့ရသည်၊ “ကြာမြင့် စွာကာလလွန်ပြီးမှ သင်သည်အုပ်ချုပ်ရသော အခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ ဓါးဘေးနှင့်လွှတ်၍” အငယ်၈၌ ၎င်း၊အငယ်၁၆တွင်၊ ပို၍သေးကွဲအောင် မိန့်တော်မူထားပါသည် “နောင် ကာလတွင် ငါ၏ပြည့်တစ်ဖက်၌ သင့်ကိုငါဆောင်ခဲ့မည်မဟုတ်လော”ဟူ၍ မိန့်တော် မူပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြိုတင်ဟောကြားရာတွင်၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကာလလွန်ပြီး နောင်ကာလဟုဆို၏။ ၎င်းဆိုလိုရင်း၊ နောင်ကာလဟူသည် ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ် မကြွလာခင်၊ အချိန်ကာလကို ဆိုလိုပါသည်။ အခြားသော ကျမ်းပိုဒ်ရှင်းလင်းချက်ကို ဖတ်ကြပါစို့ ဟောရှေ ၃း၄-၅။
“အကြောင်းမူကား၊ ဣသရေလလူမျိုးတို့သည် နေ့ရက်များစွာ၊ ရှင်ဘုရားမရှိ၊ မင်းသားမရှိ၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမရှိ၊ ဆင်းတုမရှိ သင်တိုင်းမရှိ၊ တေရပ်ရုပ်တုမရှိဘဲ၊ နေရကြလိမ့်မည်။ ထိုနောက်မှဣသရေလအမျိုးတို့သည် ပြန်လာ၍ သူတို့ဘုရား သခင်ထာ၀ရဘုရားကို၎င်း၊ သူတို့ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကို၎င်း၊ ရှာ၍ နောင်ကာလ၌ ကျေးဇူးတော်ကို ခံအဲ့သောငှါ၊ ထာ၀ရဘုရားထံတော်သို့ တုန်လှုပ်လျှက်ပြေးကြ လိမ့်မည်” (ဟောရှေ၃း၄-၅)။
၂။ ရိုလ်ဒင်းဂိတ်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်ကျမ်းစာကျောင်း၏ ဓမ္မပညာရှင်များမှားနေသည် ကိုတွေ့ရမည်။ ဣသရေလလူမျိုးတို့သည် ပြန်လာ၍ သူတို့ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရား ကို ရှာဖွေလာကြမည်ဆိုခြင်းသည် ဗါဗုလုန်ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်လာမည်ကို ရည်ညွန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ခရစ်တော်မကြွလာမီ ဘုရားသခင်ထံပြန်လာကြမည်ကို ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဇကျေလ၃၆း၂၇-၂၇ကို ဖတ်ကြည့်ပါက အောက်ပါ အတိုင်းတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့ကို အတိုင်းတိုင်း၊ အပြည်ပြည်တို့က၊ ငါခေါ်ခဲ့၍ စုဝေးစေပြီးလျှင်၊ သင်တို့နေရင်းပြည်သို့ ငါပို့ဆောင်မည်၊ သင်တို့အပေါ်မှာ သန့်ရှင်းသော ရေကိုဖျန်းသဖြင့် သင်တို့ကို ခပ်သိမ်းသောအညစ်အကြေးမှစ၍ ခပ်သိမ်းသော ရုပ်တုတို့နှင့် ကင်းစင်စေမည်။ စိတ်နှလုံးသစ်ကို ငါပေးမည်။ သဘောသစ်ကို သွင်းထားမည်။ သင်တို့ခန္တာထဲက ကျောက်နှလုံးကို နှုတ်၍ အသားနှလုံးကို ပေးမည်။ ငါဝိညာဉ်ကိုလည်း သင်တို့ထဲသို့ သွင်းပေးသဖြင့် သင်တို့သည် ငါ၏တရားလမ်းသို့ လိုက်၍ ငါစီရင်တော်မူချက်တို့ကို စောင့် ရှောက်ကြလိမ့်မည်” (ယေဇကျေ ၃၆း၂၄-၂၇)။
အပိုဒ်ငယ်၂၆နှင့်၂၇တို့သည် အသစ်သောအသက်တာ၌ မွေးဖွါးခြင်းနှင့်ပါတ်သက် နေပါသည်။ ပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးချေ။ ထိုပရောဖက်ပြုချက်သည် နောက်ဆုံးသော သမိုင်းနိဂုံးကို ရည်ညွန်းပါသည်။
၃။ ရိုးလ်ဒင်းဂိတ်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်ကျမ်းစာကျောင်း၌ရှိ ဓမ္မပညာရှင်တို့သည် မှားယွင်းနေကြပါသည်။ ထိုသူတို့က ဣသရေလအမျိုးတို့ တဖန်ပြန်လည်စုရုံး လာခြင်းသည် အေဒီ၇၀၊ ယေရုရှလင်မြို့ကြီးပျက်စီးပြီးနောက်တွင် ပြည့်စုံမည် ဟုဆိုကြသည်။ ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“သူတို့သည်ဓါးဘေးဖြင့် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ အခြားသော ပြည်အရပ်ရပ်သို့ ဖမ်းသွားကြလိမ့်မည်ဇ၊ တပါးအမျိုးတို့သည် မိမိတို့အချိန် ကာလမပြည့်စုံမှီတိုင်အောင်၊ ယေရုဆလင်မြို့ကို ခြေနှင့်နင်းကြလိမ့်မည်”။ (လုကာ ၂၁း၂၄)။
ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဣသရေလလူမျိုးတို့သည် တပါးအမျိုးသားတို့ ၏”ခြေနှင့်နင်းခြင်း”ကို “တပါးအမျိုးသားတို့ အချိန်ကာလမပြည့်စုံမှီတိုင်အောင်” အနာဂတ်တွင် ခံရကြမည်ဟု မိန့်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရှင်လုကာ၂၁း၂၄နှင့် ပါတ်သက်၍ ဒေါက်တာဝီလ်ဘာ.အမ်စမစ် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ သမ္မာကျမ်း စာတော်မြတ်၌ မိန့်ကြားထားသည့်အတိုင်း “တပါးအမျိုးသားတို့၏ အချိန်ကာ လ၏အဆုံး” ခရစ်တော်ဘုရား ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမည့် အချိန်တွင် ဣသရေလ လူမျိုးတို့သည် ပြန်လည၍စုစည်းလာကြမည် ဟူ၍ ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ ဂျွန်အက်ဖ်ဝေါလ်ဝုဒ်ကလည်း သူ့၏စာအုပ်စာမျက်နှာ ၄၉-၅၁တွင် အထက်ပါအတိုင်း အောက်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ Armageddon, Oil and the Middle East. ဣသရေလလူမျိုးတို့ မိမိတို့နေရင်းပြည်၌ ပြန်လည်စုရုံးလာခြင်းသည် ဒုတိယ အကြိမ် ခရစ်တော်ကြွလာရန်၊ အလွန်နီးကပ်နေသည်ကို ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (see also Dr. Ed Dobson, Final Signs, Harvest House, 1996, p. 118).
၄။ ရိုလ်ဒင်းဂိတ်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊ ကျမ်းစာကျောင်း၌ရှိ ဓမ္မပညာရှင်တို့သည် မှားယွင်းနေကြပါသည် ထိုသူတို့က ရှင်မဿဲ ၂၄း၁၅၌ ခရစ်တော်ယေရှုဘုရား ကြိုတင်မိန့်ကြားခဲ့သော ဗိမာန်တော်ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးနှင့်ပါတ်သက် ၍ “ပရောဖက် ဒံယေလဟောသည့်အတိုင်း ဖျက်ဆီးတတ်သောရွံ့ရှာဖွယ်အရာ သည် သန့်ရှင်းရာအရပ်ငှါန၌ စိုက်နေသည်ကို သင်တို့မြင်ရလျှင်” ထိုအရာသည် ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ ပထမအကြိမ်ဂျူးလူမျိုးများ မိမိတို့နေရင်း ပြည်၌ပြန်လည် စုစည်း ခြင်းမရှိလျှင်၊ အကယ်၍ ဗိမာန်တော်ကို၊ မဆောက်ဖြစ်လျှင်၊ ထိုသို့ပရောဖက်ပြု ချက်ပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပေ။ အနာဂတ်၌သာ ပြည့်စုံလာမည်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ရိုလ်ဒင်းဂိတ်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊ ကျမ်းစာကျောင်း၌ရှိ ဓမ္မပညာရှင်များသည် ခရစ်တော် ဘုရား၊ ဤလောက၌ သက်ရှိထင်ရှားစဉ်၌ရှိ၊ ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းကြသော ဖါရိရှဲများ အလားတူဖြစ်ပါ သည်။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်များ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပညာရှင် ဒေါက်တာဒီဟန်းပြောကြားချက် တို့သည် လုံး၀မှန်ကန်ပါသည်၊ “ယခုတွင် ပရောဖက်ပြုသမျှတို့သည် အားလုံးပြည့်စုံနေကြပြီဖြစ်သည်၊ ထိုသို့တခုခြင်း ပြည့်စုံလာခြင်းက၊ အရှင်သခင် ပြန်လည်ကြွလာဖို့ နီးပြီဖြစ်ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာ တော်က သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်”ဟူ၏။ အခြားသောပုပ္ပနိမိတ်များ မတွေ့မြင်ရသော်လည်း (ဣသရေလ အမျိုးများပြန်လည် စုရုံးလာခြင်း) နိမိတ်က၊ နောက်ဆုံးသောကာလသို့ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေပြီဟူသော လုံလောက်မှု သတိရှိစေပါသည်။ ယေရှုသည် ကြွလာပါတော့မည်” (Dနံaညေယ ငဘငိ.ယ စ. ၃၁). ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ် ရပ်လျှက် အောက်ပါဓမ္မသီချင်း သီဆိုကြပါစို့။
ယခုဤစဉ်းစား ထင်မြင်ချက်သုံးခုကို အဆုံးသတ်ပါတော့မည်။ ပထမ၊ ဣသရေလ လူမျိုးများ မိမိတို့နေရင်းပြည်၌ ပြန်လည်စုရုံးလာကြခြင်းသည်၊ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၏ အမှန်တရားကို ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယ၊ ဣသရေလလူမျိုးများ မိမိတို့နေရင်းပြည်၌ ပြန်လည်စုရုံးလာကြ ခြင်းသည်၊ သမ္မာကျမ်းစာဆိုင်ရာ ကြိုတင်ယောကြားချက်များ တိကျမှုကို ပြသပါသည်။ ထို့ကြောင့် ငရဲ ရှိကြောင်း သင့်အားသတိပေးခြင်းသည် ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းနှင့် ကယ်တင်ရှင် ခရစ်တော်ဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ရှာဖွေတတ်ရန် ကူညီမစပေးပါလိမ့်မည်။ တတိယ၊ ဣသရေလလူမျိုးများ မိမိတို့နေ ရင်းပြည်၌ ပြန်လည်စုရုံးလာကြခြင်းသည်၊ ယေရှုဘုရား၏သနားဂရုဏာတော်နှင့် သင့်အားသင့်၏အပြစ် မှကယ်တင်နိုင်ကြောင်းကို ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကြီးမားသော ဘုန်းတန်ခိုးတော်အားဖြင့် သင့်ကို ဆေးကြောသန့်စင်နိုင်ကြောင်းကို ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်ကို သင်အမှန်တကယ် ယနေ့ ညကိုးစားဖို့ တောင်းဆိုပါသည်! ဣသရေလလူမျိုးတို့ကို သနားကြင်နာ ဘိသကဲ့သို့ သင်အပေါ်၌လည်း သနားခြင်းဂရုဏာ သက်ရောက်လျက်ရှိနေပါသည်။ ဗါတိမဲကဲ့သို့ ယေရှုအားငိုကြွေးလျှက်၊ အော်ဟစ်ဖိတ် ခေါ်လိုက်ပါ။ “ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်အား ကယ်မသနားတော်မူပါ! ယေရှုကျွန်ုပ်အား ကယ်မသနားတော်မူပါ!” ဟူ၍ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါ။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင်၊ ဒေါက်တာဂရိတ်တန် အယ်လ်ချန်မှ ယေဇကျေလ၃၆း၁၆-၂၄ကို ဖတ်ကြား ပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖလ်စ်မှ (၁၈၄၈-၁၉၂၉၊ ဖရိဒရက်စ်.အီး၊ ဝေသာလီ သီကုံးသော “သန့်ရှင်းသော ရွှေမြို့တော်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။